Mmekọrịta: The Coolidge Effect and seeking novelty | Ụgwọ Ọrụ Ụgwọ
Home mmekọrịta Nsogbu Coolidge
Enwere nsogbu na atụmatụ okike, ahụhụ na sistemụ, ọ bụrụ na-amasị gị. Nọdụ ala n’etiti mmadụ mbụ anyị hụrụ n’anya ma dịrị n’otu agaghị enyere anyị aka ịgbasa mkpụrụ ndụ ihe nketa anyị. Gbasa mkpụrụ ndụ ihe nketa bụ nọmba nke Nature 1. Obi uto anyi n'otu n'otu adighi adi n'ime atumatu a. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụmụ anụmanụ niile, gụnyere anyị bụ ụmụ mmadụ, nwere ụlọ oge ochie ndị sayensị kpọrọ Nsogbu Coolidge. Ọ na-arụ ọrụ iji mee ka anyị chọpụta ndị mmekọ 'akwụkwọ' ma ọ bụrụ na ọrụ mmanye anyị yiri ka a ga-eme. Ọ na-arụ ọrụ eme ka ụlọ, ma ọ bụ na-enwe nkụda mmụọ, otu onye ma ọ bụ ihe mkpali. Ogologo oge ha ka ha na-abanye 'ụba' na ụbụrụ oge ochie. Ka oge na-aga, anyị enweghi mmasị maka otu onye ahụ na-enwe mmekọahụ.
Nke a bụ ebe a na-eche na okwu a bụ "Mmetụta Coolidge" sitere na ya. The President na Oriakụ Coolidge e gosiri [iche iche] gburugburu ihe ibuo ọchịchị ugbo. Mgbe [Oriakụ Coolidge] biara na ulo okuko ochoputara na oke okuko na ete aka ugboro ugboro. Ọ jụrụ onye na-ejere ya ozi oge ole nke ahụ na-eme ma gwa ya, "Ọtụtụ oge kwa ụbọchị." Oriakụ Coolidge kwuru, “Gwa onye isi ala mgbe ọ gafere.” Mgbe a gwara ya, Onye isi ala jụrụ, "Otu ọkụkọ ọ bụla?" Azịza ya bụ, "Oh, mba, Maazị Onye isi ala, ọdụkọ dị iche n'oge ọ bụla." Onye isi ala: “Gwa Oriakụ Coolidge nke ahụ.”
Ndị ọrụ ugbo maara nke a kwa dịka oke ehi na-eso naanị ehi otu oge n'otu oge. Ha ga-acho ehi ohuru ohuru n’ọhịa ka ha nwee ike igbanye nri ehi niile. Usoro ihe omume oge ochie a ịgbasa ọtụtụ mkpụrụ ndụ ihe nketa dịka o kwere mee, adabaghị na ndụ anyị mepere emepe taa. Anyị chọrọ ijikọ ma nọgidesie ike ruo ogologo oge o kwere mee. Okpukpe na obodo dị iche iche ejirila ụdị atụmatụ dị iche iche wee gbagharịa ahụhụ a - na-ekwe ka ụmụ nwoke karịa nwunye, ịlụ ha na-eto eto ma na-agba nnukwu ezinụlọ ume ka ha na-arụsi ọrụ ike, ma na-eleghara ndị nwe nwanyị anya.
Ọ bụ ntụpọ a na usoro ọmụmụ anyị, mmetụta Coolidge, nke mere ka ụlọ ọrụ ịntanetị na-akpali agụụ mmekọahụ banye n'ọtụtụ azụmahịa ọtụtụ ijeri dollar. Ozugbo mmadụ ‘tụụrụ nri ya ruo n’afọ ojuju’ nke o doro anya na ya na ya ga-enwe mmekọahụ, ha ga-akwụsị. Nke a na-eme ọbụlagodi na ọ bụ naanị onyogho nke otu. Mgbe ahụ ụbụrụ na-ewepụta obere "na-eso ya" dopamine ma na-achụ nta maka ohere ịmụba ọhụụ. N'ihe dị ka nde vidio vidio iri na-eri na UK naanị kwa ụbọchị, ọ dị ụkọ nke ndị di na nwunye dị njikere. Ihe a niile na-aga n'ihu n'amaghị ama ma na-emetụta omume kwa ụbọchị ọ dịghị obere.
Ozi ọma ahụ bụ na anyị ekwesịghị ịdaba na The Coolidge Effect. Anyị mmadụ bụ ndị maara ihe mgbe anyị na-etinye uche anyị na ya. Site n'ịmụta iji belata mmetụta nke dopamine dị ukwuu n'ime ụbụrụ ma na-edozi nguzozi na ikuku oxytocin dị otú ahụ na-ebelata nrụgide nrụgide, anyị na-akwado agbakwunye ịhụnanya na njikọ. Ndị a na-adigide ma nyere anyị aka inwe ọganihu ma n'otu n'otu ma n'otu. Maka ama ndi ozo banyere nke a anyi ji obi anyi kwadoro ebe a www.reuniting.info.
<< Ashụnanya Dị ka Ọchịchọ Mmekọahụ Ibelata agụụ mmekọahụ >>